outdoor garden rattan outlet pool patio furniture, Outdoor Furniture from China on TopChinaSupplier.com
Soo-saare Hoyga Internetka Products Loisege Chaise bannaanka banaanka jardiinooyinka bannaanka lagu ciyaaro ee barkadda dabaasha
bannaanka banaanka jardiinooyinka bannaanka lagu ciyaaro ee barkadda dabaasha
1 Cadad $ 920.00 $
Muuqaal / Wiiq
Model No. TF-9450
size Φ200*288 cm
Waxyaabaha aluminiumada frame; PE rattan; waterproof cloth
QTY / 20GP sets 2
QTY / 40HQ sets 6
Nest Lounger cushion * 1
50*50cm pillows * 2
60*60cm pillows * 2
Sidee loo sameeyaa?
Adeegsiga oqalab tayo sare leh, heerarkeenna ayaa ah kuwa ladagaalan oo aan sun ahayn. Garabkayaga gacanta ku tolan
waxay bixisaa muuqaal dayactir ah oo bilaash ah oo ka hortaga kala-jabka iyo kala-jabka. Unug kasta wuxuu ku duubaa a
aluminium adag adkayn ffangaska oo bixiya xasillooni aan fiicnayn iyo cimri dherer.
1.100% gacan-ku-dhego-saareyaal xirfad leh
2. Labaduba waxay ku habboon yihiin gudaha iyo bannaanka
3. Shucaaca UV wanaagsan, heerkulka sare u adkaysata, cimilada u adkaysata, midab madhan
4. leh barkimooyin biyo qabatin leh oo biyaha celiya oo ikhtiyaar u leh
5. Midabka PE rattan & barkin & barkimooyin sida aad jeceshahay
6. Alaab tayo sare leh oo bey'ad-saaxiibtinimo leh oo qiime badan leh
7. Alaabada oo dhan waxay bixiyaan ugu yaraan 2 sano dammaanad
8. OEM ama ODM ayaa la heli karaa
Hadaad ubaahantahay xulashooyin badan, fadlan cona sii.
Foshan Tanfly Furniture Co., Ltd ku takhasusay soo saarista alaabta guriga dibedda muddo sannado ah. Waxaan inta badan diirada saareynaa qalabka kaladuwan ee banaanka ah, sida kursi heeso, fadhiga dibedda iwm Waxaan u abuuri doonnaa alaab guri wixii aad rabto sababtoo ah waxaad tahay imxero noo ah
* Miisanka: 7 sano, tusaalayn, in kabadan 100 shaqaale iyo warshad 7000 mitir oo laba jibaaran, 2000 qol oo mitir laba jibaaran iyo xafiis.
* Tayada: SGS waa la oggolaaday.
* Awoodda: in kabadan 300 * 40HQ coshaqaaleyaasha kartida alaabta guriga sanadkiiba.
* Gaarsiinta: Nidaamka amarada OA oo ku filan wuxuu hubiyaa keenista 15-25 maalmood.
* Iibinta ka dib: Dhammaan cabashooyinku waxay maareeyaan 1-3 maalmood gudahood.
* R&D: 4 qof R&D team diirada saaraan guryaha banaanka, uguyaraan hal katalouge cusub sanadkiiba lasii daayo.
* Hal joojinta xirmooyinka ee bannaanka ee guriga: TANFLY waxay bixisaa xalka alaabta guriga dibedda ee ugufiican. Haddii aad u baahato qalab kale oo banaanka ah oo aynaan soo saari karin, waxaan ka caawin karnaa dibedda maalgalinta iibsadeyaasha.
Waxaan ku faraxsanahay inaan maqalno weydiimahaaga waqti dhow. Waad ku mahadsantahay droku codsanayaa boggayaga internetka.
1. Waxaan leenahay internatioqaybta nasiinada ee ganacsiga, oo leh professiojawaabta nal waqtiga;
2. Waxaan leenahay adeegga OEM, ugu dhakhsaha badan ayaan ku siin karnaa xigasho baku saleysan shuruudaha la diyaarshay;
3. Waxaan haysannaa dad warshado ku shaqeeya oo si gaar ah ula shaqeeya iibka, oo awood u siinaya inaan ka jawaabno oo aan xallinta arrimaha si dhakhso leh oo isku xirnaan leh, sida dirista muunado qaar, sawirro HD ah, iwm;
1. Waxaan haysannaa professiokooxda adeegga iibinta ka dib, iyagoo ujeedadoodu tahay wax ka qabashada dhammaan dhibaatooyinka suurtagalka ah ee macaamiishayadabuulka iyo sida saxda ah, oo ay kujirto magdhow iyo soo-celin, iwm;
2. Waxaan haysanaa iibyo si joogto ah ugu diraya macaamiisheenna moodooyinka cusub, sidoo kale calaamado cusub ayaa ka muuqday suuqyadooda baku saleysan xogtayada;
3. Waxaan taxadar weyn siinaynaa tayada badeecada iyo xaalada ganacsi ee macaamiisheena, waxaanan ka caawinaynaa inay si wanaagsan wax u bartaan.
Q1: Waa noocee shuruudaha lacag bixinta ee la aqbalo?
A: T / T (Beddelista Isgaarsiinta)B: Unio-galbeednC: PaypalD: MoneyGramQ2: Goorma ayaa alaabta la keeni karaa kadib markii la amro?
Waxay kuxirantahay badeecadaada laguu habeeyay, waxay noqon kartaa 10 maalmood ilaa 30 maalmood,Alaabada caadiga ah, waxaan ku gaarsiin karnaa oMarka laga soo tago sida aan haysanay, inta badan waxyaabaha aan ku bixin karno 15-20 maalmood oo shaqo gudahood! waqtiga saxda ah ee gaarsiinta waxaa lagu cayimay qaansheegta oAmarka nce waa / conadag / ied.Q3. Muddo intee le'eg ayay qaadataa ka hor intaysan macaamiisha qaadan alaabtu?
Ka sokow wax soo saarka waqtiga mentiokor ku xusan, sida caadiga ah waxay qaadataa ugu badnaan 10-25 maalmood shixnad kasta oo la geeyo deked kasta oo lagu tagayo adduunka. Waxay kuxirantahay dekadaada waxaanan kuu dooran doonaa habka dhoofinta deg degga ah si aan u hubinno inaad alaabta horay u heshid!Q4: Waxyaabaha lagu muujiyey mareegtada ayaa diyaar u ah in ay bixiyaan markay amraan kadib?
Walxaha badankood waxaa loo baahan yahay in la sameeyo oAmarka nce waa / conwaxyaabaha / ied.Stock waxyaabaha waa la heli karaa xilliyo kaladuwan awgeed, fadlan coshaqaalahayaga kala xiriir macluumaad faahfaahsan.Q5: Sideen ku heli karaa oraah una habeeyaa?
Kaliya u ogaysii lambarrada shay shaqaalaheenna ah (ama lkhad) waxyaabaha aad xiisaynayso waxaanan kuu diyaarin doonnaa oraah-bixin adiga kuu faahfaahsan. Qaansheegta Proforma ayaa la bixin doonaa oamar nce waa conacayb iyo wax soo saar ayaa la bilaabi doonaa obixinta hormaris bixinta ayaa la soo gabagabeeyay.
alaabta guriga Dhar Dibadda ah
alaabta guriga loo yaqaan 'bamboo patio alaabta guryaha
saqafka buluuga ah
heb patio alaabta guriga
alaabta guriga dibedda
jardiinada safka hore ee jardiinada
Alaabta hoteelada jiifka loo adeegsado